Antrona Schieranco, Piemonte, Italy
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguLorella, Sofia & Francesco
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uLorella, Sofia & Francesco iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Kwilali encinci yakudala, ekufutshane nepaki yendalo ye-Antrona Valley apho kunokwenzeka khona ukwenza uhambo olungenakubalwa, uya kufumana "iCasa di Sofia". Indlu entle ene-rustic kunye nesitayile sangoku, malunga ne-70sqm, kumanqanaba amabini, eqaqambileyo kakhulu. Kumgangatho wokuqala indawo evulekileyo, igumbi lokuhlala, ikhitshi kunye negumbi lokuphumla, kumgangatho we-attic amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela. Ngaphandle kukho indawo yebbq enetafile yamatye kunye nendawo yokuphumla.
Indlu kaSofia ebukekayo, enqabileyo kunye neyangoku ibonisa umlinganiswa omnandi nozimiseleyo kunye nesimbo sentombi yam, apho ithatha khona igama layo.
Indawo yokuhlala inemigangatho yegranite kunye nezinyuko kunye nemiqadi yomthi yerustic. Kwindawo yokulala sifumana i-attic ye-larch wood, enomgangatho weplanga kunye neefestile ezinkulu kunye ne-skylights apho unokubukela khona i-panorama emangalisayo yeentaba zethu. Ukuchukunyiswa kwexesha elidlulileyo, kwelinye icala, livuselelwa bubukho bempahla eninzi yefenitshala esiyibuyiseleyo kwaye siyibeke kakuhle ukuze ifudumale kwaye inike okusingqongileyo umoya okhethekileyo nowamkelekileyo. Isitovu sethu somthi esinamatye siya kufudumeza ngeengokuhlwa ezipholileyo zasekwindla. Ikhitshi lixhotyiswe ngazo zonke izinto ezithuthuzelayo (i-dishwasher, i-oven, i-microwave, iketile), usingasiqithi onezitulo kunye netafile ekhethekileyo yomthi kunye nekristale.
Iisofa ezimbini ezitofotofo, iTV enkulu (i-intshi ezingama-40) enesathelayithi yesamkeli yeTV iya kukuvumela ukuba uphumle.
I-attic ifikeleleka nge-semicircular communicating staircase ezikhanyiswe ngodonga olukhulu lweglasi-concrete. Ukongeza kwindawo yokuhlambela, kunye nendlu yangasese, i-bidet kunye neshawari apho umbala obalaseleyo umhlophe kunye noluhlaza okwesibhakabhaka, uya kufumana iitawuli, isepha, ijeli yeshawa kunye nesomisi seenwele. Amagumbi amabini abizwa ngokuba yi "Zaffiro" kunye ne "Acquamarina" akulindele. Iisilingi ze-larch kunye neendonga zigqitywe ngokugqitywa komthi we-antique kunye neenkcukacha kwi-shades enemibala ukusuka kwi-blue to light blue, ukunika iindwendwe zethu imvakalelo yokuzola ngokupheleleyo, ukucamngca kunye nokuphumla.
Igumbi leZaffiro ligumbi lokulala elikhulu elinebhedi ephindwe kabini kunye nesiseko esisilayitiweyo kunye nomatrasi wenkumbulo kunye nemiqamelo. Igumbi le-Acquamarina lineebhedi ezimbini ezingatshatanga kunye ne-memory mattresses kunye ne-pillows, iziseko ze-slatted ezinokuthi zidityaniswe ukuze zenze ibhedi ephindwe kabini xa kuyimfuneko kunye nesithathu sokukhupha ibhedi enye kunye nesiseko se-slatted kunye ne-memory pillow.
Kukwakho nendawo ecetywayo yangaphandle esetyenziswa njengendawo yokosa inyama, itafile yamatye kunye neendawo zokuhlala elangeni eziya kukuvumela ukuba uphumle ngokuzola ngokupheleleyo ungqongwe yindalo.
Ukuthula kunye nomoya wokucamngca ulawula intlambo ejikelezwe ziintyatyambo zasendle, amabhabhathane, iikhilikithi, imithi ye-chestnut ebalaseleyo kunye nezilwanyana zasendle. Ngaphakathi kokusingqongileyo kuyenzeka ukuziqhelanisa:
- Ukunyuka intaba
- Nge ferrata
- Ukuhamba ngeenyawo
- Ukutyibilika kweAlpine
- I-Ice skating
- Indawo yepikiniki
-Gqibezela ukhenketho lokuhamba ngechibi le-Antrona elimangalisayo kunye nokunye okuninzi.
Umbuki zindwendwe ngu- Lorella, Sofia & Francesco
Nel piccolo e antico borgo di Schieranco, dove sono situati i nostri alloggi,si percepirà un'atmosfera da sogno facendo un salto nel passato, dove il tempo sembra essersi fermato La nostra valle offre numerosi luoghi di relax e quiete, circondati da laghi, dighe,rifugi e panorami incantevoli. Amiamo restaurate e dare vita a oggetti e luoghi datati e dimenticati.
Nel piccolo e antico borgo di Schieranco, dove sono situati i nostri alloggi,si percepirà un'atmosfera da sogno facendo un salto nel passato, dove il tempo sembra essersi fermato L…
Ukuhlala kufutshane, mna nosapho sihlala sikhona ukuze silungiselele iimfuno zakho.
ULorella, Sofia & Francesco yi-Superhost